Best Instagram Bots Comparative 2021 - Automate Instagram
Botan'ny Instagram (Bot bot) no ampiasaina hanamboarana automatique ny kaontinao, ohatra, fifanakalozana, hevitra, hafatra mivantana, hanaraka, fanafoanana ny fanaraha-maso sy ny hafa.
Ny tanjona dia ny hampitombo ny isan'ny mpanaraka anao sy hamorona tena mpanaraka anao, ary tsy fifamoivoizana sandoka sy kaonty sandoka.
Ny botan'ny Instagram dia afaka manafaingana ny fitantanana isan'andro ny kaontinao sy mampitombo ny isan'ireo fitsidihana anao, mpanaraka sy kitika amin'ny tranokalanao.
Ny horonan-tsary 20 minitra etsy ambany dia manazava amin'ny antsipiriany ny fomba fametrahana bot Instagram hanampy anao hampitombo ny kaontinao Instagram..
Ny botan'ny Instagram dia afaka mandeha ho azy asa maro – toy ny fandefasana hafatra amin'ny fahana Instagram mifototra amin'ny tanjona sy torolalana ampidirinao ao amin'ny bot Instagram.
Midika izany fa hampitombo ny fahitana ny kaontinao satria hiseho matetika kokoa amin'ny fahana Instagram ianao.. Mazava ho azy, izany dia hahafahan'ny olona mahita ny atiny sy ny anaranao, tsindrio ny kaontinao ary, raha tiany ny zavatra hitany, afaka manaraka anao izy ireo.
Arovy ny kaontinao Instagram
Ny kaonty Instagram miaraka amin'ny atiny mahaliana sy ny fanodikodinana mandeha ho azy dia hiteraka hetsika sy fifandraisana izay heverina ho voajanahary ary hiafara amin'ny fitsidihana tena mombamomba.. Mety hijanona eo ambanin'ny radarin'ny fanadihadian'ny Instagram ity..
Mifanohitra, kaonty Instagram misy atiny tsy misy dikany sy tsy misy dikany, lasibatra sy fanamboarana tsy mandeha ho azy, mifandraisa amin'ireo olona mahita fa diso na maharikoriko ilay hetsika.
Samy niaina izany avokoa ny rehetra taloha, manomboka amin'ny MD tsy mandeha ho azy ka hatramin'ny mpanaraka an-tsokosoko amin'ny sokajy samihafa.
tamin'ny taona 2017, Nangataka ny fanakatonana serivisy marobe ny Instagram, indrindra ny Instagress, fa misy ny solony.
Ny bots Instagram lehibe
Izahay dia efa nanandrana azy rehetra ary aseho eto ambany ny valiny:
Fitsapana 24 ora ho 0,99 EUR
Automation an'ny safidy ny fomba tantara
Fiarovana mitambatra ary misy ny proxy setting
Fikirana sy sivana misy hafainganam-pandeha misy
Inflact (Ingrammer teo aloha)
Fitsapana 2 herinandro ho an'ny 32 EUR
Fitaovana automatique Toy ny / Araho / Atsaharo ny fanarahana
Endri-javatra ny fiarovana sy proxy mahazatra
Fikirana haingana sy safidy sivana
3 andro Andrana maimaim-poana
Automation an'ny Tia / manaraka / tsy manaraka / maneho hevitra intsony
FANDIKANA fiarovana farany ambany ary tsy misy proxy
3 toe-javatra ny hafainganana, sivana mandroso sy mametra
3 andro fitsarana ho an'ny 1 Euro
Fiarovana sy fanampiana avy amin'i misy proxy
Fanitsiana haingam-pandeha ary misy ny sivana
fakan-kevitra afaka ary 5 andro Andrana maimaim-poana
ny mpitantana kaonty
Ny adiresy VPN / IP tsy manam-paharoa ho fiarovana
Fikirakirana hetsika hafainganam-pandeha mandeha ho azy
Ny drafitry ny Maimaimpoana ny starter maharitra
Automation an'ny Tia / hevitra
Fiarovana antonony miaraka amin'ny proxy namboarina
Fanitsiana haingam-pandeha tokana ho an'ny mandeha ho azy
Automation an'ny Tiako / araho / tsy araho / hevitra / hijerena tantara / repost / DM intsony
Fiarovana mitambatra ary proxy voatokana
Fanitsiana haingam-pandeha misy
5 andro Andrana maimaim-poana
Fikirana ihany misy optimum azo
Automation an'ny Tiako / haraho / tsy hanaraka / hijery tantara intsony
Fiambenana mahazatra miaraka amin'ny proxy namboarina
3 hafainganam-pandeha miaraka amin'ny sivana marani-tsaina
Automation an'ny Tiako / manaraka / tsy manaraka intsony
tsy misy fanitsiana haingana
Inona ny fomba arahinao mba hampahafantarana anao ny fisian'ny mpanaraka sandoka?
Instagram dia manandrana manakana ny bot miaraka amin'ny teknika vitsivitsy:
Fampandrenesana “Atoseho” mampahafantatra anao fa mamafa hafatra izy ireo “inauthentiques” izay fantatra sy novokarin'ny fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo. Ny mombamomba ny kaontinao dia voamarika ho toy ny marimaritra iraisana satria nizara izany tamin'ny antoko fahatelo ianao.
Nandefa ity fampandrenesana ity ny Instagram mba hampirisihana ny mpanjifa hanova ny teny miafiny, inona no mampifandray anao amin'ny antoko fahatelo (bot Instagram)
Ny fampandrenesana iray hafa dia manondro fa mampiasa serivisy ianao “manampy anao hahita namana sy mpanaraka” SY sakano ny kaontinao mandritra ny fotoana voatondro.
Ho an'izay, izany dia matetika noho ny fampiasanao serivisy automatique Instagram izay tsy azo antoka na mandeha ho azy amin'ny fomba tsy ara-potoana ny tianao na ny hevitrao. Tonga tao amin'ny Instagram ny fanehoan-kevitr'ireo bot ary nandefa saina mena ho an'ny Instagram – koa tandremo sao mandeha ho azy amin'ny fomba ratsy ny robot IG.
Raha mitranga ny iray amin'ireo teboka telo etsy ambony, koa miezaha tsy hatahotra. Soso-kevitra ny hampitsahatra ny fanandramanao hifandray amin'ny kaontinao, ary na ovao ny bot Instagram anao, na fandaharam-potoana ny fifanakalozanao haingana kokoa. Hanjavona ny sakana ao anatin'ny fe-potoana voalaza ao amin'ilay fampandrenesana (matetika herinandro) ary afaka manohy mifanerasera ianao.
Instagram dia tsy mametraka hetsika afa-tsy ny fandefasana ireo fampandrenesana 3 etsy ambony.
Tsy mahazatra ny hack ny kaonty na voafitaky ny bot IG, satria ireo robot ireo dia misy manokana hanampiana ny mpanjifany. Ireo robot ireo dia miankina amin'ny fiarovana ny angon-drakitrao sy ny kaontinao.
Inona no azonao atao
Iray ihany ny fomba hahazoana antoka fa ny kaonty Instagram anao dia mahazo endrika fiarovana avo indrindra., ary izany dia ny fampiasana fahefan'ny mpisolovava amin'ny kaontinao.
Ny proxy dia manova ny toerana misy ny bot, ka tsy manao hetsika faobe avy amin'ny toerana iray, inona no hirona hotaterina ho fihetsika manararaotra.
Ny serivisy mpisolo tena tianay izay hitanay dia FrogProxy. Serivisy proxy finday ity, izay midika fa ny fifandraisana dia mitovy amin'ny an'ny smartphone, amin'izay izy toa tsy mampiahiahy ao amin'ny Instagram.
Jereo ny Fampisehoana FrogProxy eto ary alao antoka fa raha mampiasa automatisation media sosialy ianao, miaro ny kaontinao amin'ny proxy ianao.
fitaka: Satria mety mbola mahazo ireo fampandrenesana manokana ireo ianao rehefa mandeha ho azy ny kaonty, tolo-kevitra ianao mba ho azo antoka foana ary hampiasa ilay bot azo antoka indrindra misy.
Inona avy ireo fiasa sy toetran'ny bots Instagram?
Mitantana kaonty Instagram samihafa izahay – noho izany dia tsy maintsy nanandrana ny top 10 izahay mba hahitana hoe iza amin'ireo bot Instagram no manao tsara indrindra, ary iza no azo antoka indrindra!
Inona ireo bots Instagram tsara indrindra?
Ny antony itiavantsika ny IBF noho ny botika hafa dia satria izy no faharoa mora indrindra eny an-tsena fa tsy ny fitaovana hafa rehetra misy dia manolotra fampiasa maro amin'ity teboka ity..
Hetsika mandeha ho azy haingana kokoa: ENY – misy hafainganam-pandeha mandeha ho azy, midika izany fa azonao atao ny mametraka ny hafainganam-pandehanao. IBF koa dia manolotra mpandrindra atiny mahafinaritra, mandeha ho azy ny hafatra mivantana sy ny fanadihadiana, izay mahatonga an'ity bot Instagram ity ho safidy tsara indrindra satria manana endrika be dia be, dia eo, mora ampiasaina ary ambonin'izany rehetra izany dia tena mora vidy isam-bolana.
VPN sy ny fikirakirana: Mamorona VPN anao manokana amin'ny fampiasana an'ity bot ity.
ARO: Rafitra fiarovana mifangaro sy ny fahaizana mampiasa ny proxy findainao manokana ho an'ny fandriam-pahalemana tanteraka. Ny hany maharatsy an'ity serivisy automatique Instagram ity dia ny tsy fisian'ny serivisy ho an'ny mpanjifa., saingy tsy mahagaga izany amin'ny vidiny. Raha manana traikefa mandeha ho azy ianao, tsy ho olana izany.
Bot botsika: Raha tianao ny fiasan'ny Instagram Bot Follower fa mila fanampiana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ianao, avy eo mety ho safidy tsara ny kapiteny sosialy.
#2 – Inflact (teo aloha Ingrammer)
Vidiny: 49 EUR isam-bolana
Hafainganam-pandeha mandeha ho azy: ENY – manana ny masontsivana ilaina izy ireo hiarovana anao. Asongadin'izy ireo ny hafainganam-pandehan'ireo hetsika amin'ny antsipiriany izay maka tahaka ny tena fitondran'olombelona, statistika sy sivana.
VPN sy ny fikirakirana: Anisan'izany rehefa mamorona ny kaonty.
ARO: Fiasa fiarovana mahazatra antenainao amin'ny serivisy mandeha ho azy.
Toerana faharoa: Boostgram dia fitaovana mitovy amin'izany izay mamela anao hampivelatra ny kaontinao instagram, na dia tsy dia mahomby toa an'i Inflact aza.
Hafainganam-pandeha mandeha ho azy: Ny fikirana haingam-pandeha mandeha ho azy dia tsara amin'ity lafiny ity – miaraka amin'ny fenitra mahazatra, tsy hihoatra ny fetra napetraky ny Instagram ianao.
VPN sy ny fikirakirana: Tsy misy fametrahana na fanampiana VPN.
ARO: Instazoods dia efa elaela izay ary fantatra eny an-tsena amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa azo antoka.. Nandritra ny taona maro, nahavita nifanaraka tamin'ny fanavaozana sy fanovana Instagram izy ireo, izay mety ho zavatra tsara ho an'ny mpanjifa ihany. Tena mila an'io karazana traikefa sy fahalalana io ianao raha mieritreritra ny hampitombo ny kaontinao Instagram marobe..
Tsy ity no traikefa tsara indrindra na fampiasa ho an'ny mpampiasa, fa tonga lafatra ny serivisy ho an'ny mpanjifa !
Bot botsika: Ny Gramista dia mitovy amin'ny Instazood.
Hafainganam-pandeha mandeha ho azy: Safidy haingam-pandeha mahazatra.
VPN sy ny fikirakirana: Tsy misy toe-javatra proxy namboarina.
ARO: Ny fonosana fototra dia manome anao filaminana azo antoka, fa tsy misy proxy teratany tsy ampy amin'ity bot ity. Azonao atao ny mandoa mpitantana kaonty hitazonana ny automatisanao ho ferana.
Bot Joli, mora ampiasaina amin'ny safidy kendrena tsara.
Bot botsika: kicksta
#5 – Sensei sosialy
Vidiny: 255 EUR isam-bolana
Hafainganam-pandeha mandeha ho azy: Misy ny fametrahana haingam-pandeha mandeha ho azy miaraka amin'ity fitaovana ity ary izy ireo no mitantana ny dingana rehetra amin'ny fizotran'ny automation media sosialy ho anao. Anisan'izany ny famerenana hamaritana ny hafainganan'ny asa mahomby indrindra hisakanana anao tsy hotaterina..
VPN sy ny fikirakirana: Mahazo ny adiresy VPN sy IP anao manokana ianao.
ARO: Manantena ny hahazo mpitantana kaonty natokana hanampy anao isaky ny mandeha ianao. Rehefa mandefa fampielezan-kevitra ianao, mila lisitr'ireo tenifototra sy kaonty tianao hapetraka ho lasibatra amin'ny automatisation ianao ary ny ekipan'izy ireo no mitantana ny ambiny. Ny valiny dia matetika miankina amin'ny kalitaon'ny atiny sy ny fikirana ampiasainao, na izany aza, nahita mpanjifa vaovao 500-1000 isam-bolana miaraka amin'ny Social Sensei izahay.
Bot botsika: Upleap dia manome mpitantana kaonty voatokana hanampy anao hampitombo ny mpanaraka anao.
Vidiny: 18 EUR isam-bolana
Hafainganam-pandeha mandeha ho azy: Ny fametrahana haingam-pandeha tsy manam-paharoa ho an'ny mandeha ho azy dia mampidina ny lampihazo.
VPN sy ny fikirakirana: : Azonao atao ny manampy ny proxy anao manokana amin'ny alàlan'ny fitaovana proxy namboarina.
ARO: Sehatra tena azo antoka sy tsy miovaova – azonao atao ny mifidy ireo kaonty tianao harahina mialoha, avy eo i Combin dia hanatanteraka ny fangatahana amin'ny Instagram, manome anao fifehezana feno.
Bot botsika: Ity bot ity dia miavaka amin'ny asany – tsy misy hafa mampiasa fifidianan'ny tanana amin'ny hetsika manokana.
Hafainganam-pandeha mandeha ho azy: Fitaovana amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy no ampiasaina hamerana ny asanao alohan'ny hanakanan'ny Instagram ny kaontinao. Mandefa azy ireo ho azy avy eo aoriany.
VPN sy ny fikirakirana: Ny rindrambaiko dia mamela anao handamina proxy, ary miankina amin'ny karazana tolotra, afaka mahazo proxy hatramin'ny 10 ianao.
ARO: Milaza izy ireo fa azo antoka 100% satria ny tolotra tsirairay dia misy proxy voatokana. Inona koa, ny angon-drakitrao dia voafafa ary mahazo tombony amin'ny fanohanana premium ianao, izay haingana be.
Bot botsika: Jeffrey
Vidiny: 29.95 EUR isam-bolana
Hafainganam-pandeha mandeha ho azy: Tsy voalaza ny fametrahana haingam-pandeha ho an'ny hetsika mandeha ho azy.
VPN sy ny fikirakirana: Andraso ny kaonty Instagram tsirairay hiasa miaraka amin'ny proxy HTTP azy manokana.
ARO: Ity bot ity dia natao hanahaka ireo hetsika ara-tsosialy isan'andro amin'ny Instagram hatramin'ny avo folo heny noho ny olon-tsotra mahavita azy ireo tsirairay. Mety hampidi-doza ny bot, satria miasa tsy tapaka mandritra ny 24 ora isan'andro, ary ny mpampiasa dia mitaky ny mety hihoarana ny fetra fampiroboroboana Instagram matetika.
Bot botsika: Growthoid
Hafainganam-pandeha mandeha ho azy:Instavast mamela anao hanitsy ny hafainganam-pandehan'ny mandeha ho azy. Ity fampiasa ity dia mety mahasoa raha tianao ny hampihena ny risika ho hitan'ny Instagram anao.. Manana safidy eo anelanelan'ny hafainganam-pandeha 3 manomboka amin'ny miadana ianao, ara-dalàna sy haingana. Ny toerana voatondro ho an'ny hafainganan'ny hafainganana dia tokony “nampindrana” rehefa manomboka mampiasa ny serivisin'izy ireo ianao.
VPN sy ny fikirakirana: :
Azo alaina sy apetraka amin'ny findainao na PC ny rindrambaiko proxy natao ho azy.
ARO:Fitaovana fiarovana mahazatra, na izany aza, Nambaran'izy ireo fa ny serivisy fitomboany dia mifanaraka tanteraka amin'ny fepetran'ny serivisy Instagram.
Bot botsika: Nitreo
Vidiny: 95 EUR isam-bolana
Hafainganam-pandeha mandeha ho azy: Manana ny toe-javatra ilaina izy ireo mba hiarovana ny kaontinao ary ao amin'ny tranonkalany dia milaza izy ireo fa manaraka ny fe-potoana iasan'ny Instagram ny bot.
VPN sy ny fikirakirana: Manolotra fividianana proxy maimaimpoana sy fanamboarana izy. Ny rafitr'izy ireo koa dia mikarakara ny fampiharana fiarovana ho anao..
ARO: Eo amin'ny lafiny filaminana, Manolotra vahaolana hafa sy manavao ny Ektora hahazoana antoka fa tsy hoheverina ho spam na voarara ny mpampiasa azy. Ny lahasa automatique rehetra dia miorina amin'ny AI ary ny sehatra dia mampiasa ny fanekena ny tarehy ary maka tahaka ny kinova farany an'ny fampiharana finday Instagram. Ny serivisy fitomboana ataon'izy ireo dia mifototra amin'ny fihetsiky ny olombelona amin'ny resaka hetsika Instagram, io no fomba ahafahan'izy ireo mamolavola mpihaino feno mpampiasa tena izy.
Bot botsika: Growthsilo
F. INDRINDRA INDRINDRA INDRINDRA BOTA INSTAGRAM INDRINDRA
ny. Amin'ireo botso rehetra hitanay, mamporisika ny Instagram Follower Bot izahay satria mandeha haingana be, indrindra amin'ny fifidianana pro pro.
F. AHOANA NO AZONAO MIARO NY KAOKO
ny. Azonao atao ny miaro ny kaontinao amin'ny alàlan'ny serivisy proxy. Amin'izao fomba izao, hiova ho azy ny adiresy IP anao.
F. INONA INDRINDRA NY IG BOTS TANANA FIALAM-BOLA
ny. IBF sy Ingramer no bototra instagram tsara indrindra ho an'ny filaminana. Azonao atao ny miaro ny kaontinao amin'ny alàlan'ny serivisy proxy.
F. HOSOKOA ny kaontiko
ny. Miankina amin'ny fomba itondranao ny kaontinao sy raha mampiasa proxy ianao..
F. MISY BOTA AO INSTAGRAM?
ny. Ny ankamaroan'ny botan'ny Instagram dia mitovy ary manaraka azy avy eo, miankina amin'ny bot tsirairay.
F. Ara-dalàna ny BOTS INSTAGRAM?
ny. Ny orinasan-tserasera dia mety mikorontana amin'ny bots sasany, miankina amin'ny ataon'ny bot tsirairay. Na dia tsy ara-dalàna aza izy ireo.
F. MISY BOTOTRA INSTAGRAMA AZY?
ny. Ny ankamaroan'ny bot dia misy valiny tsara, indrindra ny IBF sy Ingramer.
F. ATAOVY INSTAGRAM BOTS MBOLA MIASA 2020?
ny. Ny botika sasany dia tsy miasa intsony, ary mety tsy miasa intsony ny fiasa sasany. na izany aza, ny ankamaroan'ny bots ao amin'ny lisitra etsy ambony dia mandeha tsara.
F. MAHATONGA VE NY INSTAGRAM BOTS??
ny. ENY, afaka mahazo mpanara-dia tena haingana ianao, miankina amin'ny akany.
Lahatsoratra teo alohaAhoana ny fomba hanampiana tantara ao amin'ny Instagram
Lahatsoratra manarakaNy TikTok Bots tsara indrindra eny an-tsena sy ny fomba hiarovana ny kaontinao